भैसी पाल्ने एक सय २५ जनालाई २० हजारका दरले अनुदान – नयाँ अभियान
भैसी पाल्ने एक सय २५ जनालाई २० हजारका दरले अनुदान
in कृषि, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ७, सानोसिरुवारीका एक सय २५ जना किसानले दुहुनो भैंसी पाले बापत २० हजार रुपैंया वडा कार्यालयबाट अनुदान पाउने भएका छन् ।
नगरपालिकाको चालु आ.व.मा भैंसी पालन अनुदानको लागि विनियोजन गरेको २५ लाख रुपैंयाबाट एक सय २५ जना कृषकलाई २० हजारका दरले अनुदान वितरण गर्ने तयरी रहेको वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष उमाप्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभएको छ ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले भने सहकारीबाट सञ्चालीत डेरीमा दुध बेच्ने किसानलाई प्रतिलिटर ३ रुपैंया अनुदान दिइरहेको छ । यसरी भैंसीमा नै अनुदान दिँदा किसानहरु उत्साहीत भई भैंसी पालनमा वृद्धि हुने नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिं तामाङले बताउनुभएको छ ।
वडा कार्यालयले भैसीपालक किसानहरुलाई अनुदान रकम दिनको लागि गठन गरेको छनौट समितीको अनुगमनको निर्णयको आधारमा बुधबार अनुदान सम्झौता गरेको हो ।
सुरुमा प्रतिभैैैंसी २५ हजारका दरले १०० वटा भैंसीलाई अनुदान दिइने भनिएको भएपनि किसानको उत्साहजनक उपस्थितीका कारण रकम घटाएर भैंसीको संख्या बढाइएको वडाध्यक्ष दुलालले बताउनुभयो । अनुदान रकम स्थानीय मैत्री साना किसान सहकारी संस्था मार्फत वितरण हुनेछ ।
भिमटारमा मनाइयो माघे (हल्लेउ) संक्रान्ति